Beesha samaroon, iyo sacad muuse malaha gunnimada iyo colaadda abtiga ayay ka jeclaadeen inay tolnimo isu laabxaadhaane, guluf ololeeya kala guurana, taasaa idinla macaane | <<<GIRIYAADNEWS<<<<
Beesha samaroon, iyo sacad muuse malaha gunnimada iyo colaadda abtiga ayay ka jeclaadeen inay tolnimo isu laabxaadhaane, guluf ololeeya kala guurana, taasaa idinla macaane
Posted on Seteembar 30, 2012 by giriyaadnews
Maqaalkan waxaan ugu soo celiyay labadan beelood, ee kari waayay inay xil isa saaraan, ee talo la’aanta iyo doqonnimada gaadhsiisay inay wada noolaan kari waayaan.
Manta tay wadaanna kama duwana tii hore, ee maqaalkan aan ugu soo celiyay bal in Rabbi idin garansiiyo samaha.
Reer Xareed iyo Reer Maxamuud Nuur diide ceebta obocdooda jiifta, inay sidii awooyaashood u maareynjireen, runta wejiga saaraane. Waxaanse ogahay colaadi inkastoo ay dheeraato, inayan faaiido keenaynin, Nabadduna Sandulle Ninwalba ku tahay, isagoo intii hore ka khasaare badan.
Marka hore Eebaheen colaaddan nacasnimada ah haynaga mooso, intii ku dhimatayna naxariistiisa janno ha ka waraabiyo.
Waxay soomaalidu ku maahmaahi jirtay hadal waayeel waa guudmar, maaha aragtidu inay maahmaahdani dhimatay, waxaase jirijirtay in ruuxa waayeelka ah aan laba jeer hadalka la xasuusin jirin, oo ay ceeb ahayd inuu garanwaayo nuxurka looga golleeyahay. Waxaa nasiib darro iyo guul darro aad uweyn ah in labada ardaa, ee aynu sheegaynaa muddo dheer la soo daalaadhacayeen, xallinta arrintan dhexdooda ku timid. Ma waxay noqdeen waraabihii la yidhi laf guri taallana uma roona ilkihiisana uma roona. Anigu ruux ahaan waxaan is weydiiyay talaw labadan reer ee ba’ay ee marba cidkale usoo gurmanayso, miyaa laga waayay rag runta u badheedha, oo beeshan isdhashay ah, oo nabad beer xaadhan ka dhaliya, mar waxaan idhaa talaw wax raga oo 50 jir ku siman, oo garcadaawe iyo gargacalba ka soo talin jiray, oo ehelka iyo gacalka iyo xigaalaha iyo xididkaba milgadiisa suurayn kara ma laga waayay.
Dhulkan baaxaddiisu tobanka kiiloomitir ka yartay ee intaasoo khasaare ah loogu beegsanayo, ee inta ku dhimanaysaa, kugu dhimay oo kaa dhimay tahay, ee marnaba aan ninna gar iyo libin ku helayn, abtigay ayaan dilay, iyo wiilkii walaashay dhashaan dilay.
Nabigeennii SCW udgoonaa ayaa mar uu gaalo heshiis la galayay, ayay gaaladii ku tidhi heshiiska ha ku qorin rasuulkii Ilaahay ee Maxamad, ee waxaad ku qortaa Maxamad Cabdillaahi. Nebigu sidiibuu ka yeelay, markaasay asxaab badani ka jidhdiidday arrinkii, oo nebigii ku tidhi ha ka yeelin. Waxuu ugu jawaabay waxii ummadda danteeda ah ayaa fiican in la yeelo.
Nebigu awood buu u lahaa inuu yidhaa sidaan rabo, hala yeelo, isaga oo og in Rabbina ku garab taagan yahay, waxuuse ka doortay mar haddaanay waxba yeelaynin, uu u raaco siday yidhaahdeen qoladaa gaalada ahayd.
Waxaa nacasnimo ah in ay labadaa beelood ee sida biyaha iyo caana isugu milmay, kala garqaadan waayaan, oo hadallo tookh iyo faan, iyo wiirsi ah, isu la fadhiyaan, guryaha muskooda. Ninna kama qarsoona inay isxan maqlaan, saa aqalwalba gabadh abti loo yahay ayaa lagu qabaaye.
Waxaa fool xumo kale ah in hablahaa guriga ay dhex joogaan, hadallo laga yaayaqsoodo aan marna dhagaha looga duwin, ee waxkastoo aanay geyinba agtooda laga yidhaahdo, iyaga oo xambaarsan ilmihii ay dhashay ee colaadda reerkooda looga gaynayo.
Wax sii ridan maaha erayo ka soo yeedhay innamo yaryar oo xabbad ku garaadsaday, manaaha wax nin weyni sii raadraaco. Waxaase dhibaato ah in cuqaasha iyo waayeelka labadan beedood ka gaabsadaan inay xakameeyaan buunbuuninta xaaladdan, oo haddaad si u eegtona laga dhigi karo cibaaro samada ka soo dhacday, marna laga dhigan karo qaddar xagga Eebbe ka yimid, oo laga samri karo.
Maahmaah laga sheegay gabadh uu walaalkeed naaskeeda taabtay, waxay tidhi “NAASKA WALAALKAY I QABTAY, HADBA WAA SIDAAN ANIGU KA DHIGTO”. Dunida wax walba way dhacaan, gurrac iyo samina way noqotaa, waxaase ceeb ah in GARAADKU LUMO, oo duq iyo aaran lakala yeelan waayo.
Waxaan ku soo gunaanadayaa, oo aan ogahay, meel kasta oo ay idinla martoba, colaadkasta oo aad sii oogtaanba, dilkasta oo aad sii badisaanba, inay labadiina beeloodba khasaare ku dambaynaysaan, oo aydaan marnaba huraynin nabadda, iyo wanaagga. Ma waxaad garan weydeen afartan nin oo dhexdiina ah, oo xidid iyo xigaaloba garanaya, oo weliba la dhaariyo si aydaan u quuddarayn, iska soo dhex saara, oo talo qurux leh haydiin keenaane.
Mawaxaydin garan weydeen dhulkan anfacsiga Eebbahay idiin dul keenay ka wada faa’iidaysta, intaad dhagar ku galaysaan. Haynu ognahayna inaan ciidda ninna jeebka ku sii guranaynin ee ay weliba isaga ciid kale ka sii hoosaynayso.
Waxaan idin odhan lahaa Reer Xareed iyo Reer Maxamuud Nuur, inaan qof isirka soomaali sheegtaa idinka guursan doonin, oo idinla xididi doonin, oo agtiina ka soo dhawaan doonin, haddaydaan maanta arrintaa si xarrago leh isaga dhammaynin.
Somali waxaa xishmaddu ku jirtay, ee lagu kala dambayn jiray, waxay ahayd Waayeel qawl leh, oo qabasho leh, oo dulqaad leh, oo kalgacal iyo dugsi leh.
Waxaan idin odhan lahaa labadiinan beelood, laydinka aqbali maayo, waanu heshiin kari waynay, laydinka aqbali maayo, waa naloosoo gurman waayay, laydinka aqbali maayo, cidkalaa caqligayaga maamulanaysa, oo cadaawad na dhex dhigaysa. Waa wax laga yaayaqsoodo inay colaad doqoniimo dirir ahi xilligaa idin la soo gaadho. Colaad walaal iyo ehel cidina ma saari karto, haddaanay iyagu garan xumaantada ay leedahay,
Odayaal labadiina reerba waad buuxdaane, shaydaanka sawirka idin tusaaya, iska naara, oo xiskiina ku soo noqda, oo sida walaalaha uwada hadla.
Rabbi khayrka hayna tuso.
London U. K
« GURYAHA QARANKA EE XUKUUMADDA SIIRAANYO UGU BALLAN QAADDAY INAY KA GADAYSO DAHABSHIIL, IYO HANTIKUXOOGLAYAASHA. QARANKU WUU DABAJOOGAA HANTIDAAS SHARCIDARRADA LOO ADEEGSADAYL CIDKASTA OO HUNGURAYSAANA CALFALMAYSO HANTA QARAN. Madaxwayne Siilaanyo Oo Caawa Wax Ka Badal Ku Sameeyay Hay’adaha,Samafalka Madaxtooyada,Dalxiiska,Dhaqanka, Hantida Ma Guurtada Iyo Hay’ada Wadooyinka Somaliland Ee SRA+Sii Akhri »